Bawar: Waa filim ku saabsan haweenka reer geesiga ah ee geesiyaasha ah ee u dagaallamaya waxbarashadooda - Equal Access International
“Waxbarashadu waa noloshayda. Haddii aad rabto inaad qaadato, markaa way fiicantahay inaad i disho. I dil! Tani waa waxa Paghunda, oo ah mid ka mid ah laba dumar ah oo hogaamiya, ay ku dhahdo aabaheed oo ka adkaaday qaabka cajiibka ah ee Bollywood, Bawar film. Filimku wuxuu muujinayaa halganka nolosha dhabta ah ee laba gabdhood oo reer miyi ah oo u dagaallamaya mustaqbalkooda. In kasta oo tani ay tahay xariiqa filimka, farriintiisa adag waxay la mid tahay haweeney kasta iyo gabar kasta oo reer Pakistan ah oo la nool sinnaan la'aanta ka jirta bulshada aabbaheed.
Sannadkii 2016, iyadoo qayb ka ah Horumarinta Sinnaanta Jinsiga iyo Awoodsiinta Haweenka iyo Gabdhaha Pakistan mashruuca oo ay taageerayso Sanduuqa Nabadda iyo Amniga ee Caalamiga ah (GPSF), EAI ayaa soo saartay oo baahisay Bawar, filim 60 daqiiqo oo asli ah ayaa loogu tala galay in lagu abuuro isbadal xagga fikradaha iyo dhaqamada la xiriira xuquuqda gabdhaha iyo haweenka. Filimku wuxuu ka sii daayay dhowr xarun telefishan oo qaran wuxuuna helay jawaab celin aad u wanaagsan, qaasatan daawadayaasha ku sugan aagagga ay maamusho qabaaillada loo yaqaan (FATA) iyo gobolka KP.
Marka loo eego xogtii dhowaan la soo saaray ee UNICEF, in ka yar 30 boqolkiiba haweenka da'da yar ayaa dhigta dugsiga sare ee Pakistan iyo, magaalooyin ka baxsan, boqolleydan xitaa way ka hooseeyaan. Balochistan gobolka, boqolkiiba 64 haweenka dumarku waligood iskuul ma dhigan. Meelaha baadiyaha ah, haweenka reer Pakistan waxaa laga niyad jabiyaa inay aadaan iskuulada, qoysas badan oo muxaafid ahna, waxaa laga filayaa inay guriga joogaan oo ay guriga daryeelaan
Magaca filimka Bawar (Trust) wuxuu fiiro gaar ah u leeyahay kalsooni la’aanta rag badan oo reer Pakistan ah ay u qabaan dumarka. Ragga, sharci darrada iyo xeerarka dhaqanka awgood, haweenka ka celiya guryaha, waxna akhrin, oo aan awoodin inay iyagu doortaan.
Waxaan dareemayaa wanaag markaan ogahay inaan labadayda gabdhood la dhaqmay si lamid ah labadayda wiil anigoo ku taageeraya inay helaan waxbarasho sare oo heer jaamacadeed ah. Waxaan rajeynayaa in fariinta telefilkan ay la degi doonaan beelaha Pashtun. ” ayuu yidhi Sardar Hussain, Kaaliyaha Madaxweyne Ku-xigeenka Beeraha / U-doodaha Sare ee Maxkamadda Sare ee Peshawar.
Daawadayaasha EAI si loo ballaariyo gaadhitaanka filimka. Hina Mushtaq Mansehra ayaa tiri "Telefilms-yada noocan oo kale ah waxay saameyn weyn ku yeelan karaan maskaxda dadka waxayna ku qancin karaan inay gacan ka geystaan ​​waxbarashada gabdhaha iyo awoodsiinta haweenka." "Way fiicnaan laheyd haddii telefilikankan si ballaaran loogu qaybin jiray meelaha miyiga ah si loo horumariyo sheeko door ka leh waxbarashada gabdhaha iyo muhiimadda ay leedahay."
Si loo sameeyo filimo sheeko oo xoog badan oo keenaya nolosha arrimaha bulshada ee muhiimka ah.